Ọrụ agha | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ọrụ agha
Ederede 18 "b" na ID agha
Ederede 18 "b" na Tiketi militarydị agha. Tụfuo ya ma ọ bụ gosipụta ya na udi “B”, a gaghị akpọ ha n'oge udo. Isiokwu 18. Ọdịdị nke onwe: Ihe ederede edepụtara maka (psychopathies, transient…
Kedu ebe dị anya site na nsọtụ ubu ubu ka lyashki na akwa ohu?
Kedu ụdị anya site na eriri ubu ruo na obere sergeant Stitch? 3! Dabere na Iwu nke Minister nke Defense nke Russian Federation si 03.09.2011 N 1500 "N'elu iwu nke iyikwasị uwe ndị agha na akara ...
Ha nyere akwụkwọ na Voikenkomat maka ndị nne na nna ka ha jụọ ajụjụ: data gbasara ndị ikwu na ibu ụgwọ, ndokwa ụlọ
Ha nyere ajụjụ na Voikenkomat iji jụọ ndị nne na nna ajụjụ: data gbasara ndị ikwu na ibu ụgwọ, ndokwa ụlọ. A gwaghị gị ka ị kpughee ozi nzuzo. ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ ...
B4 na-agwụ agwụ ihe gịnị ka nke a pụtara?
B4 na-agwụ agwụ ihe gịnị ka nke a pụtara? adighi mma, B-3 ka na-adighi nma Ya mere, i ruru eru maka agha, ma na mmachi. Ndị agha, nke dị mfe. Ebee ka ...
Kedu otu esi banye n'ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri?
Kedu otu esi banye n'ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri? Dị ka paragraf nke 14 nke Iwu banyere nkwenye nke ụmụ amaala nke Russian Federation, mkpebi nke ebumnuche nke nkwenye na ọdịdị, ụdị agha ndị agha ndị agha nke Russia, ndị ọzọ ...
Kedu ihe agha. ọchịagha na ihe ọ na-eme?
Kedu ihe agha. ọchịagha na ihe ọ na-eme? Ugbu a, a na-akpọ ya ndị uweojii ndị agha. Aha ahụ na-ekwu maka onwe ya. 93.2. Ihe ndi ozo nke oru ozo bu: mmepe nke usoro na nhazi nke ichikota ...
O siri ike ịbanye ụlọ akwụkwọ agha na ihe dị mkpa maka ịbanye ??
O siri ike ịbanye ụlọ akwụkwọ agha na ihe dị mkpa maka ịbanye ?? kama ọ dịghị. ọ dị mkpa na ụmụ amaala nke Russian Federation bụ, ọ bụ ezie na hel maara na ọ bụghị ihe siri ike karịa na mahadum nkịtị ....
Ogologo oge ole ka ị chọrọ site na nzuzo gaa colonel? Oge oge site n'ọkwá gaa n'ọkwá! Ònye maara?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe site na nkịtị ruo na ebe ndị agha? Nkezi oge site na ọkwa ruo n'usoro! Onwere onye mara? Nke a bụ ihe e dere n'akwụkwọ iwu nke usoro maka ije agha: ——————————————————- 22. Usoro maka itinye ndị agha ọzọ…
Ajụjụ maka nkwụsịtụ sitere n'aka ndị agha
Ajuju nke agha site n'aka ndị agha Ọ bụrụ na nwa gị nwoke nọ na kọleji jisiri ike gosipụta ikike ya n'otu akwụkwọ nbinye akwụkwọ, mgbe ahụ a gaghị enye ya ngbagha nke abụọ. M kwusiri ike - NA-EGO, t. ...
Onye nnochi anya nke oma, ma obu kpochapu: gini bu okpokoro isi na otu n'ime ndi agha? Okpokoro isi nwere ike ijere otu afọ? Daalụ n'ihu !!!
Onye nnochi anya nke oma, ma obu kpochapu: gini bu okpokoro isi na otu n'ime ndi agha? Okpokoro isi nwere ike ijere otu afọ? Daalụ n'ihu !!! okpokoro isi, okpueze, mmuo, wdg, na ndi otu agha ndi agha na-egosi ...
Kedu ihe dị iche n'etiti nke mbụ, nke abụọ na nke atọ nke ụmụ amaala nọ na ebe nchekwa ahụ? Kedu ka m ga esi achọpụta ọkwa m?
Kedu ihe dị iche n'etiti nke mbụ, nke abụọ na nke atọ nke ụmụ amaala nọ na ebe nchekwa ahụ? Kedu ka m ga esi achọpụta ọkwa m? A na - etolite afọ site na ọkwa na afọ gara aga maka ndị isi nke 5 afọ. ...
Ugbo ala ... gini bu ihe ndia .. gini ka ha gunyere ..?
Ndị agha ala ... kedu ihe ha bụ ... gịnị ka agụnyere na ha ..? Igwe ndi agha (SV) nke otutu na ndi di iche-iche nke ogwe aka na uzo nke ibu agha bu udiri agha nke ndi Russia (RF Forces Forces) bu n’obi…
Kedu otu esi esi agha? Site na ọrụ nkwekọrịta
Kedu otu esi esi agha? Site na ọrụ n'okpuru nkwekọrịta Nyochaa nkwekọrịta gị, a na-ekwupụta okwu niile nke nchụpụ site na ọrụ n'ebe ahụ. ịkwesịrị ịdekọ akụkọ banyere nchụpụ nke ndị na-abụghị ndị na-akwado usoro nke nkwekọrịta c) n'ihi
Akpokorita akwukwo biara, anaghi m abanye ya aka ... achoro m iga na ndi ozo?
Subpoena biara, abịaghị m ị binye aka na ya ... ọ bụ iwu na m ga-aga bọọdụ nhazi? Afọ ole a, o kwesiri ịpụta n'ọfịs ndị agha na ndebanye aha ndị agha, nke a na - arụpụtakwa na ịchụpụ ọrụ ndị agha, n'amaghị iwu,…
Ndewo m, ekpebisiri m ike ịbụ ọrụ siri ike na Semenov regri brigade nke nchedo m ga-akwa ụta na-aga n'ebe ahụ?
Ihe na 18.11.2017
Ndewo m, ekpebisiri m ike ịbụ ọrụ siri ike na Semenov regri brigade nke nchedo m ga-akwa ụta na-aga n'ebe ahụ? Ebe ụlọ ọrụ ndị agha na-edebanye aha agha kpebisiri ike na ị bụ ihe mkpofu niile, ị na-amata ndị agha gị naanị maka ...
Kedu ihe dị iche n'etiti onye uweojii lara ezumike nká na onye uweojii na-edebe ego?
Kedu ihe dị iche n'etiti onye uweojii lara ezumike nká na onye uweojii na-edebe ego? Azịza mbụ bụ nke kachasị mma. Site na agha, ha ma ọkụ ma ọ bụ kwụsị. Ihe dị iche n'etiti ha bụ n'ezie na ụdị ...
ndị bụ ndị na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ihu ọha?
ndị bụ ndị na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ihu ọha? ndị ọrụ nke nchịkọta ego ha gụnyere ndị ọrụ na-arụ ọrụ na òtù, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na ihe ndị ọzọ. Nzuzo nke sitere na mmefu ego nke di iche iche (gọọmenti etiti, obodo ma obu mmefu ego nke ndi di iche iche ...
Kedu ihe bụ ebe e wusiri ike? Kedu ihe bụ ebe e wusiri ike? Ebee ka m nwere ike ịchọta ozi gbasara atụmatụ ndị ọzọ dị ugbu a?
Kedu ihe bụ ebe e wusiri ike? Kedu ihe bụ ebe e wusiri ike? Ebee ka m nwere ike ịchọta ozi gbasara atụmatụ ndị ọzọ dị ugbu a? Ejuputala isi n'inweghi ihe omuma. Chọrọ ịmara ihe niile gbasara atụmatụ ...
Ego ole bụ tiketi ndị agha na ebe ịzụrụ ya
Ego ole bụ tiketi ndị agha na ebe ị ga-azụta ya 70 puku mmadụ na steeti ụlọ ọrụ St. Petersburg site na onye ndụmọdụ ọka iwu ruo nde iri asatọ rubles, ma ọ bụ ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ ọzọ nke onye omekome ahụ ...
Ịmụ maka ikike nke ụlọ ọrụ ndị agha, ogologo oge ka ọzụzụ maka ụdị B ga-adịru?
Na-amụ maka ikike sitere na ụlọ ọrụ ndị agha na ndebanye aha ndị agha, ogologo oge ha ka ọzụzụ maka ngalaba B ga-adịru? Na arịrịọ nke akwụkwọ nyocha, ụlọ ọrụ ndị ndebanye aha na ndebanye aha ụlọ ọrụ nwere ike iziga ya ka ọ gaa ụlọ akwụkwọ a na-anya ụgbọ ala mgbe niile n'okpuru mmemme "ọzụzụ nke ndị ọkwọ ụgbọala C." ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,388.